ဒီလဖတ်စရာ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း | Page 65
လှုပ်ခါနေတဲ့ အသံလှိုင်းများ – ပိုင်မိုး
Posted by Pye Moe
ငါ့သား အဆင်ပြေလား… တဲ့သတ္တုပြားလေးထဲက အလျားလိုက်ဆင်းလာတဲ့ အသံအဆင်ပြေတယ်ပြောတိုင်း ငါးပါးသီလ ကျိုးတယ်။ငွေလေ ...
ငါ့သား အဆင်ပြေလား… တဲ့သတ္တုပြားလေးထဲက အလျားလိုက်ဆင်းလာတဲ့ အသံအဆင်ပြေတယ်ပြောတိုင်း ငါးပါးသီလ ကျိုးတယ်။ငွေလေး တပဲတပြားအတွက်တနယ်ခြားမှာ အလုပ် လုပ်နေတာပျော်လို့မဟုတ်ဘူး အဖေနဲ့ အမေ။ကျနော့် မွေးရပ်နိုင်ငံရဲ ...
| by Pye Moe
Posted by Saung Win Latt
ပန်းချီ အာကာဦး “ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဒေသိယ SKETCH (သို့မဟုတ်)မောင်အောင်ပွင့်နဲ့ အံ့အားတသင့် စကားလုံးများ”လ ...
ပန်းချီ အာကာဦး “ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဒေသိယ SKETCH (သို့မဟုတ်)မောင်အောင်ပွင့်နဲ့ အံ့အားတသင့် စကားလုံးများ”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာဆရာကြီး မောင်အောင်ပွင့်နဲ့ စာရေးဆရာဆောင်းဝင်းလတ်တို့ရဲ့  တေ ...
| by Saung Win Latt
Posted by ကိုကိုအောင် (ရုက္ခ)
ရုံး ခန်းလေးထဲမှာ တိတ်ဆိတ်လို့နေတော့သည်။ ၀န်ထမ်းအားလုံး ထိုင်ခုံလေးတွေဆီမှာ ငူငူလေးတွေ ထိုင်နေကြလေသည်။ အစ ...
ရုံး ခန်းလေးထဲမှာ တိတ်ဆိတ်လို့နေတော့သည်။ ၀န်ထမ်းအားလုံး ထိုင်ခုံလေးတွေဆီမှာ ငူငူလေးတွေ ထိုင်နေကြလေသည်။ အစည်းဝေးခန်းရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ လေအေးစက်ရဲ့ အအေးဓာတ်လေးက ဆော့ကစား နေလေသည်။ နံရံထက ...
| by ကိုကိုအောင် (ရုက္ခ)
သုံးနှစ်စာအုပ် – ခက်ဆစ်
Posted by ခက်ဆစ်
“သုံးနှစ်စာအုပ်” စာမျက်နှာ ခန့်မှန်းခြေ ၁ဝ၉၅ ရွက် နင်လည်း လက်ရေးမလှသလို ငါလည်း စာမရေးတတ်ခဲ့ဘူး အဖု ...
“သုံးနှစ်စာအုပ်” စာမျက်နှာ ခန့်မှန်းခြေ ၁ဝ၉၅ ရွက် နင်လည်း လက်ရေးမလှသလို ငါလည်း စာမရေးတတ်ခဲ့ဘူး အဖုံးတောင်မပါတဲ့ စာအုပ်မှာ နိဂုံးလည်း ပါမလာခဲ့ဘူး နင်နဲ့ငါနဲ့ ကာရိုက်တာ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း နေ ...
| by ခက်ဆစ်
Posted by ဇော်လူစိမ်း
ဝဇီရာရုံ​အောက် ဖြန့်​ခင်းထားတဲ့ ​ဝေါရှိထဲမှာ မိုးအုံ့​နေတဲ့ ​နေ့တစ်​​နေ့ကင်း​ကောင်​ တစ်​​ကောင်​ စစ်​ကြိ ...
ဝဇီရာရုံ​အောက် ဖြန့်​ခင်းထားတဲ့ ​ဝေါရှိထဲမှာ မိုးအုံ့​နေတဲ့ ​နေ့တစ်​​နေ့ကင်း​ကောင်​ တစ်​​ကောင်​ စစ်​ကြို​ခေတ်​ထဲက​နေ စစ်​ပြီး​ခေတ်​ဆီကို ခုန်​ကူးလိုက်​တယ်​​မောင်​ဂိုမာရီလမ်း​ပေါ်မှာ လိုက်​ဆွဲ​နေတဲ့င ...
| by ဇော်လူစိမ်း
ပုံပြင်ထဲက တနေ့ – လင်းခါး
Posted by လင်းခါး
တ﻿နေ့မှာ ကျ﻿နော်﻿ဟာတိမ်﻿﻿တွေကို ကြည့်﻿﻿နေတုန်းတိမ်﻿﻿တွေဟာပေါင်﻿မုန့်﻿﻿ဘေးသား﻿လေး﻿တွေ ဖြစ်﻿သွားတာကိုမြင်﻿ ...
တ﻿နေ့မှာ ကျ﻿နော်﻿ဟာတိမ်﻿﻿တွေကို ကြည့်﻿﻿နေတုန်းတိမ်﻿﻿တွေဟာပေါင်﻿မုန့်﻿﻿ဘေးသား﻿လေး﻿တွေ ဖြစ်﻿သွားတာကိုမြင်﻿လိုက်﻿ရပါတယ်﻿ငှက်﻿က﻿လေး﻿တွေ ပျံသန်းသွားတာကို မြင်﻿တိုင်းခင်﻿ဝမ်းရဲ့ ﻿ကြွေမ﻿ယောင်﻿﻿ကြွေသားလို ...
| by လင်းခါး
တံခါးမှာ သော့ကတန်းလန်း – နှင်းခါးမိုး
အိမ်ကြိုအိမ်ကြားကလက်ကျန်အမှောင်အစအနတွေကို ငှက်သံတွေကတစီစီ ထိုးဆိတ်နေတယ်ဆောက်ပြီးစတိုက်နံရံနဲ့ ပြတင်းမှန်တ ...
အိမ်ကြိုအိမ်ကြားကလက်ကျန်အမှောင်အစအနတွေကို ငှက်သံတွေကတစီစီ ထိုးဆိတ်နေတယ်ဆောက်ပြီးစတိုက်နံရံနဲ့ ပြတင်းမှန်တံခါးတွေပေါ်မှာနေရောင်ကမျက်တောင်ခတ်နေပြီ တညလုံးဟောင်ခဲ့တဲ့ခွေးဟာလှေကားထိပ်မှာ ဝင်အိပ်နေလောက်ပြီ၊အ ...
အော်သံ – မောင်သင်းခိုင်
Posted by Maung Thin Khaing
အော်သံ *(၁)ကျွန်တော် အော်သံကိုကြားဖူးသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အော်ဖူးတယ်ဒေါသချော်ရည် ပွက်ပွက်ဆူတိုင်းစ ...
အော်သံ *(၁)ကျွန်တော် အော်သံကိုကြားဖူးသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အော်ဖူးတယ်ဒေါသချော်ရည် ပွက်ပွက်ဆူတိုင်းစိတ်မွန်းကျပ် အိပ်မပျော်ညတိုင်းအသံကိုခြစ်ညှစ်ပြီး ကျွန်တော်အော်တယ်အော်လွန်းလို့ အော်ရင်း … အော ...
| by Maung Thin Khaing
Posted by San Nyein Oo
ပန်းချီဝဏ္ဏဇော်နိုင်ငံသားလို့ ညွှန်းရင်လူသေနဲ့ လူသေအလောင်းလျာများ ဆိုတာထက်ပို အဓိပ္ပာယ်မရှိသင့်ဘူးလား။အကျပ် ...
ပန်းချီဝဏ္ဏဇော်နိုင်ငံသားလို့ ညွှန်းရင်လူသေနဲ့ လူသေအလောင်းလျာများ ဆိုတာထက်ပို အဓိပ္ပာယ်မရှိသင့်ဘူးလား။အကျပ်အတည်းလို့ပြောရအောင်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာအပျိုမြှေး မရှိတော့တာလည်းကြာခဲ့။မသာကို တို့ပတ ...
| by San Nyein Oo
တခုသောကမ်းခြေမှ – မင်းချောမြင့်
Posted by မင်းချောမြင့်
ဆိုင်းဘုတ်တွေ သစ်လွင်နေပေမယ့် အတွေးတွေအိုဟောင်းသွားပြီ။ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ အများကို စည်းရုံးထားလို့ ရမယ်ထ ...
ဆိုင်းဘုတ်တွေ သစ်လွင်နေပေမယ့် အတွေးတွေအိုဟောင်းသွားပြီ။ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ အများကို စည်းရုံးထားလို့ ရမယ်ထင်နေသေးတာပဲ။ မိုးကလင်းပြီ။ လမ်းမီးတွေက မမှိတ်သေးဘူး။ အတွေးတွေ လင်းပါစေတော့ရယ်လို့ ထွန်းများထားတ ...
| by မင်းချောမြင့်
နေပြည်တော် – မောင်ကြူးရင့်
Posted by မောင်ကြူးရင့်
ပဒေသရာဇ် ကုန်းဘောင်ခေတ်သီပေါမင်း ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မင်းညီမင်းသားတွေ
မှတ်တမ်းကိုအမှတ်ရတယ်သမီးတော် တဲ့ရာဇဌာနီလမ်း တဲ့မြို့အမည် ရွာအမည်လမ်းအမည်တွေပဒေသရာဇ်အမည်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ရန် ...
| by မောင်ကြူးရင့်
Posted by Soe Nay Lynn
.PART TWOI know you have been taught to greet people by saying the word ‘Mingalaba’. Forget it. Burmese p ...
.PART TWOI know you have been taught to greet people by saying the word ‘Mingalaba’. Forget it. Burmese people never say ‘Mingalaba’ when they greet each other. It is merelyamasked and ostentatious ...
| by Soe Nay Lynn
နရသိန်လရောင် (သို့မဟုတ်) မောင်လေးအောင်တမ်းချင်း
Posted by အောင်ဝေး
“ငါဟာလမင်းကို မမြင်ရတာအနှစ် သုံးဆယ် ကြာပြီ”ဒါက လူရွှန်းရေးခဲ့တာပါ။ A MAD MAN’S DIARY စာအုပ်ထဲမှာလို့ ထင်ပါ ...
“ငါဟာလမင်းကို မမြင်ရတာအနှစ် သုံးဆယ် ကြာပြီ”ဒါက လူရွှန်းရေးခဲ့တာပါ။ A MAD MAN’S DIARY စာအုပ်ထဲမှာလို့ ထင်ပါသည်။ ကျနော့်ဘ၀မှာလည်း လမင်းနှင့်လရောင်ကို မမြင်ခဲ့ရသည့် နေ့ တွေ၊ လတွေ၊ ရက်တွေ တရှည်တလျားရှိခဲ့ဖ ...
| by အောင်ဝေး
စစ်ရဲ့ ဇာစ်မြစ် – လင်းနွေးအိမ်
ဘာတခုမှ ယုံကြည်စရာမလိုတဲ့ ခေတ်ဘယ်တော့ရောက်မလဲယုံကြည်မှုတွေက သစ်သီးဝလံထက်စစ်မီးလျှံသာပေးနေတယ်။အတွေးအခေါ်ပညာရ ...
ဘာတခုမှ ယုံကြည်စရာမလိုတဲ့ ခေတ်ဘယ်တော့ရောက်မလဲယုံကြည်မှုတွေက သစ်သီးဝလံထက်စစ်မီးလျှံသာပေးနေတယ်။အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တို့ ...“ထမင်း” ရမယ့်အတွေးမျိုး“ပေါင်မုန့်”ရမယ့်အတွေးမျိုးတွေသာတွေးကြပါပေးကြပါဘာမှန်းမသိ မွေ ...
ဖမ်းမိတဲ့ သစ်ပင် – ရိုးတံ(ပုလဲနယ်)
Posted by ရိုးတံ (ပုလဲနယ်)
ခုနစ်စဉ်ကြယ်ကြားအောင်အော်ပေမယ့်လမ်းကလည်းမမြင်ရသေးဘူးရေမြုပ်ကမ်းတွေက လက်လှမ်းမီသလောက်ငါဟာသန်းခေါင်ရဲ့ဟိုဘက ...
ခုနစ်စဉ်ကြယ်ကြားအောင်အော်ပေမယ့်လမ်းကလည်းမမြင်ရသေးဘူးရေမြုပ်ကမ်းတွေက လက်လှမ်းမီသလောက်ငါဟာသန်းခေါင်ရဲ့ဟိုဘက်ရောက်နေတယ်…ငါက နိုင်ငံရေးကို ရေရောနေတာပေါ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အသက်ဝိညာဉ်ငါ ရွံခဲ့တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရိ ...
| by ရိုးတံ (ပုလဲနယ်)